(Dhageyso):-Taliyaha Ciidamada Soomaliland iyo koranel Caare Oo Warbaahinta isu marinayey hadalo kulul. – hareerley News
Taliyaha Ciidamada Soomaliland Oo ka jawaabayey Ciidamadii ka goostey dhawaan Soomaliland ayaa soo hadalqaadey koranel Caare kuna tilmaamey in uu yahay dambiile Qaran Oo 4ruux dileykiiskiisuna wali uu maxkada yaalo.
Dhanka kale koranel Caare ayaa isagana warbaahinta la Hadley isagoo is difaacaya ayuu ku sheegey in uu yahay mid aanu waxba ka jirin hadalaka Taliayaha Ciidamada S/Land.
Warbaahinta ayaa noqotey meelaha hadalada leysku dhaafsado taas oo keeneysa mid iyada markaasi dabka sii hurineysa .
Halkaan hoos ka dhageyso Labada Mas’uul
Taliyaha Ciidamada Soomaliland Nuux Ismaciil
Halkaan ka dhageyso koranel Caare
Shan qof Oo uu Shabeel ku dhaawacay Dalka Kenya
Sida aan wararka aan ku heleyno Shabeel ayaa weeraray dad ku noolaa deegaanka Ngaaini ee degmada Muranga ee bartamaha dalka Kenya. Shabeelka ayaa dhaawacay ilaa 5 qof waxaana dhamaan dadkaas uu ka dhaawacay wajiyada, madaxa, lugaha iyo gacmaha. Dadka deegaanka ee degmada Muranga ayaa laga soo xigtay in horay dhowr jeer Shabeel uu kusoo Weeraray […]
Hogaamiyaha militariga Suudaan, Janaraal Cabdelfataax Burhaan ayaa maanta loo dhaariyay madaxa dowladda kumeel gaarka ah ee Suudaan. Waxaa uu hogaamin doonaa golaha maamulka sare oo ka kooban lix qof oo rayid ah oo ka socda dhinaca mucaaradka iyo afar sarkaal oo militari ah saddexda sanno ee socota. Sidoo kale xubanaha kale ee ka tirsan dowladda […]
Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo dhambaal u diray walaalkiis Mudane Ismaaciil Cumar Geelle, Madaxweynaha dalka aan walaalaha nahay ee Jabuuti, ayaa uga tacsiyeyay geerida ku timid, Alle ha u naxariistee marxuum Sacad Cumar Geelle. “Waxa na soo gaaray warka naxdinta leh ee dhimashada marxuumka oo la dhashay walaalkey Madaxweyne Ismaaciil Cumar […]
Al Shabaab Oo Weeraray Saldhig ay Deganaayeen Ciidamada DF iyo AMISOM
Hogaamiyaha K/Galbeed Oo isagu yeeray Saraakiisha Ciidamada Booliska :-(Sawiro)